.. နည်းပညာ..: အွန်လိုင်မှ ငွေရှာနည်း
Publishers (website တည်ထောင်သူများ)
သင်၏ website (သို့) parked-domain တွင် AdInnwa မှာ ကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ၀င်ငွေ ရှာနိုင်ပါသည်။ 'What we do' page တွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ AdInnwa မှ ၀န်ဆောင်မှုပေးသော Ad model များမှာ CPC (Cost Per Click) နှင့် CPA (Cost Per Action) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Site တည်ထောင်သူများမှာ ကြော်ငြာထည့်သွင်းရုံ၊ ထိုကြော်ငြာများသို့ user များ click နှိပ်ရုံဖြင့် ပိုက်ဆံရမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကြော်ငြာများမှ တစ်ဆင့် ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူ လုပ်စေချင်သော action တစ်ခုကို user များလုပ်မှသာ site တည်ထောင်သူ အနေဖြင့် အကျိုးအမြတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို action များမှာ user များ e-commerce site များတွင် ဈေးဝယ်ခြင်း၊ member register ပြုလုပ်ခြင်း၊ newsletter signup ပြုလုပ်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Website တည်ထောင်သူများက မည်သည့် CPA program ထည့်သွင်းမည်ကို ရွေးချယ်ပြီး join ရန်လိုအပ်သည်။ CPA ကြော်ငြာများသည် CPC ကဲ့သို့ အလိုအလျှောက် site ပေါ်တွင် ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ Website တည်ထောင်သူမှ CPA တစ်ခုကို join ပြီဆိုလျှင် ထို CPA ပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူမှ လက်ခံရန်လိုအပ်သည်။ ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူ လက်ခံမှသာ ထို CPA ကြော်ငြာသည် website တည်ထောင်သူမှ သူ၏ site တွင် ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ။ ။ သင်က Hotel booking website တစ်ခုလုပ်ထားပြီး CPA နှင့် ပိုက်ဆံရှာမည်ဆိုပါစို့။ သင်၏ website တွင် Hotel လုပ်ငန်းများ နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သော CPA ကိုသာ သင်ထည့်ချင်မှာပါ။ ထို Hotel CPA, Travel CPA များထဲမှ commission ပိုပေးသော CPA များကိုသာ သင်က ပိုစိတ်ဝင်စားမှာပါ။ ထို့ကြောင့် သင်က ထို CPA များကိုသာ join ပြီး ကြော်ငြာရှင်က လက်ခံ (approve) ဖြစ်သည်နှင့် သင်က ထို CPA code widget ကို သင့် website တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
Account မှ ပိုက်ဆံထုတ်ခြင်း
website တည်ထောင်သူများ မိမိ account ထဲတွင် 30,000 Kyats သို့ US$40 ရရှိပြီဆိုပါက ပိုက်ဆံထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပိုက်ဆံထုတ်ယူရာတွင်
International Bank Account Number (IBAN) ရှိပါက International bank account များသို့ transfer ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
PayPal သို့ transfer ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
ထို service များအသုံးမပြုနိုင်ပါက ရန်ကုန်တွင် လူကိုယ်တိုင် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ပိုက်ဆံထုတ်ယူနိုင်ခြင်း တို့ ဖြင့် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
AdInnwa ၏ ကြော်ငြာ code အား သင်၏ website သို့ ထည့်သွင်းခြင်းမှာ လွန်စွာ လွယ်ကူလှပါသည်။ မည်သည့် site ၊ မည်သည့် platform (ဥပမာ - static HTML, PHP, JSP, ASP, .NET) တွင်မဆိုထည့်သွင်း နိုင်ပါသည်။
ထိုကြော်ငြာများကို သင့် site ၏ user များစတင် click နှိပ်ချိန်မှစ၍ AdInnwa system ၏ report တွင် ကြော်ငြာ၏ impression မည်မျှရှိသည်၊ user မည်မျှ click နှိပ်သည်၊ သင် တစ်ရက် ပိုက်ဆံ မည်မျှရှာနိုင်သည် စသည့် report များ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Publisher အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ
သင်၏ ကိုယ်ပိုင် website တွင် လွယ်ကူစွာ ပိုက်ဆံရှာနိုင်ခြင်း
သင့် site မှ ကြော်ငြာများသည် ၂၄ နာရီနှင့် ၇ ရက်ပတ်လုံး သင့်အတွက် ပိုက်ဆံရှာပေးနေခြင်း
Ad format များ အမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့် သင့် site ကို ပုံစံမပျက်ဘဲ သင့် site နှင့် သင့်လျော်ရာ Ad format ကို ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း
AdInnwa system သည် responsive web design ဖြင့်ဖန်တီးထားသောကြောင့် Smart phone များ၊ Tablet များမှ အသုံးပြု (သို့) report များကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
AdInnwa တွင် အသုံးပြုသော Ad format များမှာ
Skyscraper – 120px width နှင့် 600px height
Banner – 468px width နှင့် 60px height
Medium Rectangle – 300px width နှင့် 250px height
Small Square – 200px width နှင့် 200px height
Leaderboard – 728px width နှင့် 90px height
Wide Skyscraper – 160px width နှင့် 600px height
Ad format များ ဥပမာ ကြည့်ရန် ဤနေရာနှိပ်ပါ
Join AdInnwa asaPublisher
AdInnwa သို့ website တည်ထောင်သူ (publisher) အနေဖြင့် (join) လျှောက်တင်ခြင်းမှာ အခမဲ့ ဖြစ်ပြီး အခုချက်ချင်း Publisher account ဖွင့် နိုင်ပါသည်။
လိုအပ်သော information များ ရရှိရန်နှင့် AdInnwa system အား အလွဲသုံးစား မပြုလုပ်စေရန် sign-up အဆင့် ၂ ခုအား ပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
website တည်ထောင်သူ အနေဖြင့် Join ရန်
Posted by naihan at 04:20
windows 8 တင်ဖို့စဉ်းစားနေရင် ခဏ။
၀ါယာမလို လျှပ်စစ် (wireless Electricity)
Photoshop ဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနည်း(၂)
Photoshop ဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနည်း(၃)
Photoshop ဖြင့် ဒီဇိုင်းဆွဲနည်း(၄)
Photoshop ဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနည်း(၅)
ကိုယ်သိချင်တဲ့သူ ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာကို ၇ှာနည်း
Format Factory နှင့် ringtone ဖန်တီးခြင်း
ဝင်းကမ္ဘာကေ်ာ် (နည်းပညာ မွတ္တမ်း):ျမန္မာလို IT နည်းပ...
ကွန်ပြူတာကို စကားပြောခိုင်းပီး ကောင်မလေး ဆီက အချစ်...
Window 8 အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Computer ကို Viber ထည့်ပြီး Viber ရှိသောဖုန်းတွေနဲ...
Firefox ကို မြန်မာလိုသုံးမယ်
လင့်ကို icon image နဲ့ တွဲ ပြီးထည့်နည်း
Blog menu ဖန်တီးဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်း
ဘလော့ခရီးသည်တင်ပြီးသမျှ နည်းပညာများစုစည်းမှု ကလစ်...
မောက်ရွှေ့တိုင်း ကြယ်ပွင့်လေေးတွ ၀ဲပျံကျလာသော..
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Related Post လေးထည့်နည်း
Website Design ပညာအတွက် လေ့လာလိုသူများဖတ်ရှုရန် CSS...
ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့Recent Comments & Recent Posts ထည...
Gmail ကနေ ဆော့ဝဲတွေပို့ ချင်တဲ့အခါ ပြုလုပ်နည်းအဆင်...
Kp-3 Family ၏ဘလော့ပညာများစုစည်းမှု (၂)
ဒါကတော့ PDF Files များဖန်တီး ချင်တဲ့သူများအတွက်ပါ...
Menu တွေ လင့်တွေကလစ်တာနဲ့ new lab နဲ့ထပေါ်အောင်လုပ်...
Html Coad မလိုဘဲ Favicon ထည့်နည်း
Scrolling Text - Marquee HTML Code လေးရေးနည်း
ဘော်ဘော်တို့ ဘလော့မှာ ပြေးလွှားဆော့ကစားတတ်တဲ့သူတွေအ...